UMTHANDAZO KU-ARCHANGEL CHAMUEL UKUFUMANA UTHANDO
Umthandazo kwingelosi enkulu uChamuel, kweli nqaku uyakuyazi imithandazo emikhulu yokucela, ekhethekileyo kwimicimbi yothando, ezalisa intliziyo yakho nomoya wakho ngobukho babo kunye nokukhanya kukaThixo.
1 Umthandazo kwingelosi enkulu uChamuel
1.1 Umthandazo wokufumana uthando
1.2 Umthandazo onamandla
1.3 Umthandazo okhethekileyo wothando
1.4 Umthandazo wokutsala uthando
1.5 Umthandazo wokubuyisa uthando olulahlekileyo
Umthandazo kwingelosi enkulu uChamuel
Ingelosi enkulu uChamuel, inxulunyaniswa nemiba enxulumene nothando, ikwabizwa ngokuba ngumthunywa kaThixo, igama lakhe liguqulela "Lowo ubona uThixo."
Le ngelosi inkulu kunye nothando inxibelelene noYesu Krestu, njengoko kunokubonwa kwiivesi zeBhayibhile uMateyu 5: 8 ocaphula athi: "Banoyolo abasulungekileyo entliziyweni, kuba baya kumbona uThixo", nakuYohane 1 4:16. Apho kungqinwa khona ukuba “uThixo uluthando; lowo uhleli eluthandweni uhleli kuye uThixo, noThixo uhleli kuye ”.
Uyingelosi enkulu eyaziwayo ngokwesiko njenge-interceptor yokutsala uthando kubomi babantu, kunye nokufezekisa ubudlelwane obunothando obuhlala buhleli.
Owona msebenzi uphambili we-Archangel Chamuel kukukhuthaza uthando olungenamiqathango kunye nokuzincama kwabantu kwabanye abantu.
Ukuqala kweli candelo, siza kuthetha ngemithandazo ebhekiswe kwingelosi enkulu uChamuel ukusombulula imicimbi yothando.
Ingelosi enkulu uChamuel, wena uzele luthando, amandla namandla okuguqula izinto ezininzi ”.
"Wena uziva kwaye unovuyo olukhulu lothando lweNkosi yethu, nceda uthethelele ukuze uthando lufikelele kum kwaye nomoya wam uve oku."
"Ndivela phambi kobuso bakho ngentliziyo yam evulekileyo ukuze undifundise ubulumko bolwazi lwakho, kwaye ukwazi ukuvula amandla akho kum, nceda uvumele uthando lungene ebomini bam, ususe kum zonke iingcinga ezingalunganga ezindithintelayo, kwaye lonto indenza ndingathembi ”.
"Ingelosi eyintloko Chamuel, ndifuna uthando olunyanisekileyo nolulungileyo ebomini bam olusempilweni ngokupheleleyo."
"Ndifuna uthando olushukuma, ndifuna uthando lokwenene, olundenza ndizive ndikhuselekile, olomeleleyo, olundivumela ukuba ndinyamezele ukubona ukufika kothando ebomini bam."
"Ingelosi enkulu Chamuel, ndiyakucela ukuba ungandishiyi, wena unobabalo olungcwele lokunxila abantu ngothando, ndicela ukuba ugcwalise uthando lwam entliziyweni yam, ndiyabulela ngokungapheliyo."
Lo mthandazo uboniswe ngezantsi ulungele ukubongoza le ngelosi enkulu ukuba ibancede ekubandezelekeni nakwimeko ezibi:
"Mdali othandekayo wazo zonke izinto ezikhoyo, ndiyakucela ngamandla othando we-Archangel Chamuel ukusombulula imeko eye yazibonakalisa kum nokuba ingokuthanda kwakho."
"Ingelosi enkulu uChamuel, ndikubiza phambi kobukho bakho obumnandi kwaye ndiyavuya ukuba nawe."
"Ndiyakucela ukuba ukholwe kum amandla angenasiphelo ngaphakathi kwentliziyo yam, undincede ndithande kwaye ndihambise uthando kunye nemvisiswano kwabanye."
"Yandisa ulonwabo kunye nonxibelelwano oluhle kwaye olo thando yeyona nto iphambili ekunxibelelaneni nam kwaye ikhona kuyo yonke imisebenzi yam ukusukela kweyona incinci ukuya kweyona ibalulekileyo."
"Ndamkele kumaphiko akho aphezulu, kwaye undincede ndizivule ndithande nokusombulula iimbambano endinazo: (amagama abantu onengxaki nabo akhankanyiwe)".
"Fakela iingcinga zam kunye nezenzo zam ngothando lwakho lobuthixo, ukuze amazwi am abonise ububele endinabo entliziyweni yam, uvelwano nentlonipho kwabanye nakwam."
"Wanga onke amaphupha am, iiprojekthi zam, uthando lwam, ubudlelwane bam kunye nobomi bam bunokunxila kumlinganiso ongcwele wothando."
"Ngamana ukukhanya kwakho kobuthixo kungandihlasela kwaye kunwenwele kuzo zonke iindawo apho kundikhokelela khona."
Ukuba uyifumene le posi ithetha nge umthandazo kwingelosi enkulu uChamuelSiyakumema ukuba ufunde inqaku lethu: Umthandazo kwiNgcwele uMikayeli weengelosi.
Umthandazo okhethekileyo wothando
"Umthunywa oyiNgcwele onamandla kwaye onamandla, oqaqambisa uthando kunye nolonwabo, ngalo mzuzu ndiza kuwe ndibeke intliziyo yam ezandleni zakho."
"Ndiyakucenga ukuba ungene umphefumlo wam ngokukhanya kwakho, kwaye njengamanzi angcwele, coca yonke into ekuwo kwaye uyigcwalise ngeemvakalelo zothando."
"Oyena Ngcwele iNgelosi eNkulu Chamuel, ndiyakucela ukuba wenze okufanayo nakwabo bandingqongileyo ekunganyanzelekanga ukuba bandinike ngaphezu kothando nezinto ezisikelelweyo kuba ungumkhuseli nomgwebi weentliziyo ezilungileyo nezihloniphekileyo."
Uthando yinto ebalulekileyo kubukho babantu, apha ngezantsi sibonisa lo mthandazo ubalaseleyo wokutsala uthando kubomi bakho.
"Sithandwa sengelosi enkulu uChamuel".
"Ndiyazinikela kwaye ndizivulele wena ukuze ndifumane iimfundiso zakho kunye neentsikelelo."
“Wenze umphefumlo wam nomzimba wam uzwe luthando, ukuze ndibuva ubungqongqo babo nokuphelela kwalo; susa ukungazithembi kum nazo zonke iingcinga ezingalunganga endizifunayo kwaye ndifuna uthando, uthando oludlamkileyo oluzalisekayo, olomeleleyo, olomeleleyo, olunomonde nolundinika ukhuseleko ”.
"Ingelosi enkulu uChamuel, ingelosi yam endiyithandayo"
"Ungandishiyi kwaye uvule amehlo am ukuze ndibone uthando lufika."
"Ndiyakucela kwaye ndiyabulela, ndigcwalise ngothando lwenene."
Umthandazo wokubuyisa uthando olulahlekileyo
Lo umthandazo kwingelosi enkulu uChamuel Okuboniswe apha ngezantsi kufanelekile ukucela iNgelosi enkulu uChamuel ukuba ikuncede kubudlelwane bakho, kwaye ikuncede ukuze uthando lobomi lubuyele kwakamsinya ezingalweni zakho.
"Uyawubona umphefumlo wam kunye nentliziyo yam kwaye uyazi iimvakalelo zam ezinyanisekileyo nezinyanisekileyo, yiyo loo nto ndisiya kwintando yakho yokuthanda nokuthanda, kuba iyandicenga ukuba ndingenelele ebomini bam kwaye undincede ukuze (utsho igama lalowo umthandayo buyisa iimvakalelo zakho kunye nengqondo yakho ”.
Mnike uthando lwakho infinito ubulumko kunye nomonde ukuze abone kum kuphela kum uthando lwakhe lokwenene noluphela ”.
"Ukuba kukho into ekufuneka ixolelwe, makube njalo."
"Ukuba kukho into ekufuneka ilibalekile makube njalo."
"Ukuba kukho into ekufuneka iyamkele, makube njalo"
"Ngamana ukukhanya kwakho kukaThixo iNgelosi enkulu uChamuel, ukuba (utsho igama lomntu omthandayo) ukuqonda kunye nokuqiqa, ukuze abuyele kwiingalo zam."
Yonke le mithandazo ikhutshiweyo ibalulekile kwaye ineziphumo ezizizo kubo bonke abantu ababamemayo ngentshiseko, khumbula ukuzalisa ngobulumko nothando lokunxibelelana nengelosi enkulu uChamuel ekhethekileyo yothando.